IINDLELA EZILI-10 ZOKWENZA INDODA IQONDE IIMVAKALELO ZAKHO- PAMPEREDPEOPLENY.COM - UBUDLELWANE
Iindlela ezili-10 zokwenza iNdoda iqonde iimvakalelo zakho
Ekhaya Ulwalamano Uthando nokuthandana Uthando Nothando Romance oi-Asha Ngu UAsha Das | Ipapashwe: NgoMgqibelo, nge-7 kaJuni 2014, 19:04 [IST]
Ngexesha elithile kubudlelwane bakho, ubuya kuphosa izandla zakho kwaye uzibuze, ungayenza njani indoda yakho ikuqonde. Amadoda nabasetyhini baneendlela ezahlukileyo ebomini uninzi lwamadoda alunabuchule njengabafazi ekuqondeni iimvakalelo okanye amabinzana okufunda. Ke musa ukulindela ukuba umntu ayiqonde into yokuba abafazi baziva njani.
Umqobo omkhulu xa ucinga ngendlela yokwenza ukuba indoda ikuqonde yimeko yethu yenkcubeko njengabafazi. Asifanelanga ukuba sicinge ngeemfuno zethu kakhulu okanye sikhalaze njengoko abafazi kufanelekile ukuba bangazithembi. Oku kusibeka thina namadoda ethu kwindawo exineneyo - sifuna ukuba baziqonde iimfuno zethu, ngelixa bengarhaneli nokuba ikhona into efuna ukuthetha okanye ukulungiswa!
NGABA UZIGCINA IIMFIHLO KUMlingane wakho?
amayeza ekhaya elangeni ezandleni
Sukuyenza impazamo amadoda abuthathaka kwaye anemvakalelo. Nangona kunjalo, banentambo yokuba nendlela yokusombulula iingxaki ebomini, ngelixa abasetyhini befuna ukuba iimvakalelo zabo zamkelwe kwaye ziqondwe. Ke, ungayenza njani indoda ukuba ikuqonde kunye neemvakalelo zakho? Akukho madoda mabini afanayo-amacebo okwenza indoda yakho ikuqonde, inokwahluka. Kodwa, Nazi ezinye zeendlela zokuthetha ngeemvakalelo zakho nendoda yakho.
Khetha ixesha elifanelekileyo. Thetha naye xa engenalo uxinzelelo okanye uxakekile (okanye ebanjiwe kwiNdebe yeHlabathi). Ufuna ingqalelo yakhe epheleleyo okanye uya kukhathazeka. Mxelele ukuba nidinga ixesha elithe cwaka kunye.
Yazi ukuba uza kuthini
Hlela iingcinga zakho. Thetha ngethoni elinganayo. Ukuba nengqiqo yindlela yokwenza ukuba umntu akuqonde. Yitsho indlela oziva ngayo ngokucacileyo, nokuba kutheni uziva njalo.
Ukuba wenza ngokubanzi, akazukuqonda. Thetha ngeemeko ezithile xa uziva engaziqondi iimvakalelo zakho. Phinda uthi kutheni kubalulekile inkxaso yakhe.
ukuba ilulwane intaka ingena endlwini ingaba imbi okanye ilungile
Enye indlela yokwenza ukuba umntu akuqonde kukuba ungumphulaphuli olungileyo. Zama ukuqonda indlela avakalelwa ngayo. Uya kuwuxabisa umdla wakho kwaye awubuyisele umsa.
Ukuba ufuna ukuthetha ngemicimbi kubudlelwane bakho, yiba nobulungisa. Musa ukuthi, 'Awusoze', 'Uhlala uhlala'. Sukuphakamisa iingxabano ezidlulileyo. Ayisiyondlela yokwenza ukuba umntu wakho akuqonde.
Qonda iimpendulo zakhe ngokweemvakalelo
Xoxa ngemeko (ingxaki yemali, ukuphulukana nomsebenzi) umbuze ukuba ujongane njani nayo. Emva koko thetha ngendlela onokujongana nayo ngayo. Oku kuyakuninceda nobabini ukuba niqonde umahluko.
Indlela esebenzayo yokwenza ukuba indoda yakho ikuqonde kukuba wabelane ngamanqaku obuhlobo okanye iincwadi. Ezi ncwadi zijongana nezimo zengqondo ezahlukeneyo zamadoda nabasetyhini kwiimvakalelo.
Izibonelelo zokusebenzisa ijusi yetumato ebusweni
Enye indlela yokwenza ukuba indoda ikuqonde kukubhalela ileta malunga neemvakalelo zakho. Oku kuhle ngakumbi kuba incoko engabhalwanga inokujika ibe yingxabano.
Sukuthetha ngendlela esinye isibini esinonxibelelwano olufudumeleyo. Iya kwenza iqabane lakho lizive lingonelanga, kwaye lingazikhuthazi. Kwaye, yazi ukuba akukho buhlobo bulungile.
Yixabise imigudu yakhe
Ngamanye amaxesha, xa sonzakele, sibavalela ngaphandle abantu abasithandayo. Yamkela iinzame zomntu wakho zokuqonda iimvakalelo zakho. Oku kuya kumkhuthaza.
Fumana uncedo lweengcali
Ukuba akukho nto isebenza kwaye ubambekile kwindlela yokwenza ukuba indoda yakho ikuqonde, yiya kunye neengcebiso kunye ngokwahlukeneyo. Baza kukunceda ujongane nengxaki ngokufanelekileyo.
zenziwa njani ii-noodles zemifuno ekhaya
ukuqikelela ubomi bomtshato ngokusekwe kumhla wokuzalwa
iingcebiso zeenwele ezisempilweni ekhaya
I-shraddha kapoor kwi-aashiqui 2 kwisree
ungalonyusa njani izinga lokubetha kwendalo
Iveki ye-lakme yefashoni ye-2016 manish malhotra
zingaphi ipista oza kuzitya ngemini